Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Waa maxay sababta loogu safro Hawaii hadda? Booqo waqti kale!
Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Ma jirto sabab loogu safro Hawaii hadda waa farriinta shirka jaraa'id ee maanta ee Guddoomiye Ige. Miyaad ballansatay fasaxaaga Hawaii? Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si degdeg ah dib uga fiirsato. The Aloha Gobolku wuxuu wajahayaa duufaan kiisas cusub oo COVID-19 ah waxaana laga yaabaa inuu diyaar u yahay inuu wax ka qabto waxa soo socda. Maanta waxay ahayd maalintii ugu sarreysay ee diiwaannada kiisaska cusub ee faafa. Talada ugu fiican ee Dr. Char, Agaasimaha Waaxda Caafimaadka Hawaii, waa inaad JOOGTO GURIGA!
Elizabeth A. Char, MD, wuxuu la wareegay hoggaanka Waaxda Caafimaadka Hawai'i September 16, 2020, kadib markii uu magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Hawaii David Ige.
Shir jaraa’id oo ay maanta la yeelatay Guddoomiyaha Gobolka Hawaii Ige, waxay ku boorrisay dadka ku nool Hawaii iyo booqdayaasha inay guryahooda joogaan oo aysan xilligan safrin.
Maanta, 1,167 caabuq oo dheeri ah oo ka jira Gobolka Hawaii ayaa la soo sheegay, in ka badan laba jibaar tirada ugu badan ee abid la diiwaan geliyo tan iyo markii uu cudurku dillaacay.
Faafitaanka fayrasku isma beddeli doono illaa aan ka beddelno, Elizabeth Char oo aad u walwalsan ayaa u sheegtay saxafiyiinta shir jaraa'id oo uu ku baaqay Guddoomiyaha Hawaii Ige saaka.
Warbixintii ugu dambeysay ee COVID-19 ee ka timid Dowladda Aloha Gobolka, waxaa jira 1,167 xaaladood oo cusub oo COVID ah, taasoo wadarta guud ee kiisaska ka dhigaysa ilaa 49,564. 2,971 ka mid ah ayaa u baahday isbitaal.
In kasta oo booskii isbitaalku weli yahay mid la heli karo, saamaynta soo noqnoqoshada ee soo koreysa ee fiditaanka bulshada ee kala duwanaanshaha Delta-COVID-19 ayaa neefta ka qaata ma aha oo kaliya dadka buka laakiin qof kasta oo bulshada ka mid ah.
Markii daabacaadani ka digtay booqdayaasha in xayiraad cusub ayaa jiri doona, wax yar baynu ogeyn sida ay u xumaan doonto 4 maalmood gudahood.
Fadlan samee waxa saxda ah oo u safro Hawaii waqti kale!
eTurboNews akhriste, Marwo J, ayaa faallo ku dhejisay daabacaadan iyadoo leh:
Kuma talin lahaa in aan Hawai'i imaado waqtigan. Iyadoo aan loo eegin wax kasta oo xaddidaad ah oo halkan ku jira 2 toddobaad gudahood, miyaad runtii doonaysaa inaad fursad u hesho xaalad degdeg ah oo caafimaad oo aad rajaynayso in kalkaaliso caafimaad ama dhakhtar sabool ah oo ka shaqeynaya laba -beddelkooda ama saddex -laabistoodu ay heli doonaan waqti ay ku siiyaan daaweyn ku filan?
Waxyaabaha mar walba waa ciriiri markaan leenahay tirooyin dalxiis oo sarreeya. Waxay noqon kartaa caqabad dhab ah gelitaanka makhaayad loo oggol yahay boqolkiiba 50 deggenaanshaha.
Deganeyaasha ayaa laga yaabaa inay u dhaqmaan ama laga yaabo inaysan si wanaagsan ugu dhaqmin wejigaaga laakiin marka carruurteena la jiifinayo isbitaal, inteenna badan ma dooneyno inaad halkaan ka qaadato ilo caafimaad.
Waan ogahay in safarkaaga lacag lagu bixiyay, laakiin inta badan shirkadaha duullimaadka ayaa hadda aad u dabacsan oo ugu yaraan diyaar u ah inay ku siiyaan sumcad mustaqbalka. Marka la eego hoygaaga, waxaad ku sharxi kartaa inaad isku dayeyso inaad sameyso waxa saxda ah adiga oo aan doonaynin inaad canshuurto kheyraadkayaga oo aad aragto waxa dhaca.
Fadlan samee waxa saxda ah oo kaalay mar kale.
Guddoomiye Cige wuu khaldamay markii uu yiri dib -u -habaynta xannibaado badan weli kuma jirto saxanka. Sida muuqata, sababaha dhaqaale ayaa mudnaanta leh, sida ay ku sameeyaan Florida, Texas, Louisiana, iyo gobollo kale oo badan oo Mareykanka ah.
Waqtigan xaadirka ah, 77.98% dhammaan gobollada Mareykanka, oo ah guud ahaan 2,511 degmo, ayaa diiwaangelinaya tirada ugu badan iyo boqolkiiba faafitaanka bulshada ee fayraskan dilaaga ah, iyada oo in ka badan 10% kiisaska cusub 100,000 qofkiiba.
Dad badan ayaa sheegaya in Hawaii aysan awoodi karin inay xirto dhaqaalaheeda dalxiiska. In kasta oo xannibaadaha meesha yaal ay ka mid yihiin xirashada maaskaro, 50% heerarka deggenaanshaha ee maqaayadaha, iyo xadka dukaamada-waxaa jira dhammaantood calaamad. Sanadkii la soo dhaafay, kororka kaliya 100 kiis oo COVID ah maalintii ayaa kiciyay bandoowga gobolka oo dhan iyo xirnaanshaha buuxa ee hoteellada, dukaamada, iyo makhaayadaha.
Sida had iyo jeer, the Maamulka Dalxiiska ee Hawaii wuu aamusan yahay mana u jawaabayo muwaadiniinta, booqdayaasha, iyo suxufiyiinta. Maanta 1,167 kiis oo cusub ayaa ka gudbay khad cas oo loogu talagalay dadka deggan, laakiin yaa dhegeysanaya?
61.2% tirada guud ee dadka ayaa si buuxda loo tallaalay. Wadarta kiisaska la soo sheegay 14 -kii maalmood ee la soo dhaafay waxay ahaayeen 7,327. Wadarta guud ee dhimashada ilaa hadda waa 547.
Waxaan hadda isu diyaarinaynaa duufaan kiisaska COVID, Guddoomiyaha Gobolka Hawaii ayaa maanta yiri. Isagoo loo yaqaan Guddoomiye mar walba deggen, ayaa si muuqata uga gilgishay shirkii jaraa’id ee maanta.
Isaga oo ka jawaabaya wariye ka tirsan AP, Guddoomiyaha ayaa sabab uga dhigay 2% kaliya kiisaska cusub inay ka mid yihiin booqdayaasha. Booqdayaashu waa inay haystaan ​​baaritaanno taban ama warqado tallaal.
Kuwa haysta waraaqaha tallaalka ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo togan oo faafa, laakiin tan weligeed lama ogaan doono.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in halista ugu badan ay tahay faafitaanka bulshada ee fayraska. Hal qof ayaa siin kara 1,000 kale. Guddoomiyaha Gobolka iyo Agaasimaha Caafimaadka ee gobolka ayaa rumeysan in fayrasku ku dhex jiro bulshada, ma qirayo in dalxiisayaasha ay isku beel yihiin.
Adduunkiisa, hoggaamiyeyaasha Hawaii waxay rumeysan yihiin in dalxiisayaashu ay ku soo laabtaan aaggooda jasiiradaha, maqaayadaha iyo xeebaha kala duwan. Tani waa jaahilnimo aad iyo aad uga fog runta. Jasiiradaha yaryar sida Hawaii qof walba wuxuu la dhex galayaa qof walba, dalxiisayaasha ayaa meel walba jooga, Waikiki ama Lahaina ma aha aagag derbi ku yaal.
Dr. Char wuu saxsanaa markuu dhahayo ma jirto sabab uu qof u safro waqtigan. Waxay raacisay: "Marna ma garanaysid qofka aad ag fadhiisato diyaarad."
Soo -booqdeyaashu waxay wajahayaan xannibaadyo safar oo cusub oo loogu talagalay Hawaii.
Ka taxaddar marka aad joogto Hawaii!
Ogosto 13, 2021 markay tahay 20:50
Mahalo Ingrid jawaabtaada naxariista leh. Waad ku mahadsan tahay akhrintaada. Dhammaanteen waan walaacsannahay. Waxaan halkan u soo guuray 1988 waxaanan ka shaqeynayay warshadaha dalxiiska ilaa 1976kii.
Way i xanuunaysaa inaan dhaho dalxiiska waa inuu joogsadaa! Laakiin waxay qabataa ilaa aan ka helno wax qabad dhab ah dhibaatadan waqtiyada aan la aqoon.
Nasiib darrose, ma jirto jihayn cad oo ka jirta gobolkan, oo hoggaamiyeyaasha dalxiiska (HTA gaar ahaan) ayaa aamusnaa mar kasta tan iyo markii COVID-19 bilaabmay.
Ingrid Peterson wuxuu leeyahay,
Ogosto 13, 2021 markay tahay 20:36
Aad baad ugu mahadsan tahay dhajinta dhambaalkan! (Laga soo bilaabo degane halkan u soo guuray isagoo ilmo ah 1963.)
Ogosto 13, 2021 markay tahay 20:35